रोकिएका परीक्षा सञ्चालन हुदैँ, लोकसेवा आयोगले दियो यस्तो निर्देशन — Imandarmedia.com
काठमाडौँ। लोकसेवा आयोगले रोकिएका परीक्षा गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । लोकसेवा आयोगको ७१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मङ्गलबार आयोजित भर्चुअल बैठकमार्फत यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई कोरोना ९कोभिड–१९० सङ्क्रमणको दर कम भएलगत्तै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन् । उनले रोकिएका परीक्षा छिटो सक्नका लागि दुई÷तीन सिफ्टमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक सामग्री र जनशक्ति चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्नका लागि निर्देशन दिए ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगले तीन जनालाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गरेको छ । आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत यमुना सापकोटा, कार्यालय सहयोगी सुकमान तामाङ र दिपायल कार्यालयका नायब सुब्बा मानबहादुर साउदलाई पुरस्कृत गरिएको हो । यसैगरी आयोगले सूचना प्रविधिमा काम गर्ने कम्प्युटर अपरेटर तीन जनालाई पनि सम्मानित गर्ने भएको छ ।
पूर्वसभामुख महराबिरुद्धको बला त्कार मुद्दामा उच्च अदालतले गर्यो यस्तो फैसला
राष्ट्रपति भण्डारी टिचिङ हस्पिटल भर्ना, के भइन बिरामी
भीम रावलले माधव क्याम्प छाडेकै हुन् त ?
ओलीलाई ठूलै झड्का दिनेगरी सातै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने देउवा सरकारको तयारी,गठबन्धनमा खुसीयाली
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक आज बस्दै, ठाकुर पक्ष जान्छ की जादैन ?
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि अल्पमतमा, अब के हुन्छ ?